कहिले चल्छन् लामो दूरीका सवारी साधन ? – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१३ मंसिर २०७७, शनिबार १६:२६ English
काठमाडौँ, ३१ असार । सरकारले जिल्लाभित्र चल्ने सवारी साधन चलाउने निर्णय गरेपनि लामो दूरीका सवारीबारे भने निर्णय भएको छैन । तर लामो दूरीमा चल्ने सवारीका साधन कसरी चलाउन सकिन्छ भन्नेबारे यातायात व्यववस्था विभागका निरन्छर छलफल भने भईरहेको छ । यसै बीचमा बुधबार पनि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, ट्राफिक प्रहरी प्रमुख, यातायात व्यवसायी र यातायात मजदूरसहित छलफल भएको छ ।
आजको छलफलमा यातायात व्यवसायीहरुले लामो दूरीका सवारी साधन चलाउन सकिने प्रस्ताव गरेका छन् । विभागमा भएको छलफलमा यातायात व्यवसायीहरुले लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधन पनि चलाउन सकिने प्रस्ताव गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले आफूहरुका मागप्रति सरकार सकारात्मक बने लामो दूरीमा चल्ने यातायात चलाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको बताए ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक भीम ढकालले सरकारले लकडाउनपछि सवारीका साधन चलाउन जारी गरेको प्रोटोकलका विषयमा आज छलफल भएको जानकारी दिएका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले छलफलपछि सवारी सञ्चालन गर्न ‘एक्सन प्लान’ बनाईएको बताए । उनका अनुसार ‘एक्सन प्लान’ मा लामो दूरीका सवारी साधन चलाउन विभिन्न निकायको जिम्मेवारी तोकिने छ ।
३१ असार २०७७, बुधबार १८:१३ मा प्रकाशित